Football Khabar » लिभरपुल नापोलीसँग आफ्नै घरमा रोकियो : अन्तिम १६ जान अन्तिम खेल कुर्नुपर्ने
लिभरपुल नापोलीसँग आफ्नै घरमा रोकियो : अन्तिम १६ जान अन्तिम खेल कुर्नुपर्ने
साबिक विजेता इंग्लिस क्लब लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा जान अन्तिम खेलको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । समूह चरणको पाँचौं खेलमा पाहुना टोली इटालियन नापोलीसँग आफ्नै घरेलु मैदानमा १–१ को बराबरीमा रोकिएपछि लिभरपुलको अन्तिम खेलअघि नै अन्तिम १६ मा पुग्ने योजना पूरा भएन ।
आफ्नो घरेलु मैदान एनफिल्डमा लिभरपुल खेलको २१औं मिनेटमा गोल खाएर पछि परेको थियो । ड्रिएस मार्टिन्सले सुन्दर गोल गरेर नापोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । गोल खाएपछि चर्को दबाबमा देखिएको लिभरपुलले बराबरी गोलका लागि ठूलै संघर्ष गर्नु परेको थियो ।
दोस्रो हाफमा घरेलु टोली खेलमा फर्कियो । खेलको ६५औं मिनेटमा डेजान लोभ्रेनले कर्नर किकमा आएको बलमा हेडिङमार्फत् गोल गरेर खेल १–१ बनाएका थिए । त्यसपछि बाँकी समयमा दुवै टोलीबाट गोल नभएपछि खेल १–१ मा टुंगियो ।
अब यो बराबरीपछि लिभरपुल समूह ‘ई’को शीर्ष स्थानमा १० अंकसहित रहेको छ । तर, उसले अन्तिम १६ मा जान अन्तिम खेलसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । नापोली ९ अंकसहित दोस्रोमा छ । ७ अंक भएको रेड बुल तेस्रोमा छ । अन्तिम खेल बाँकी छँदासम्म यस समूहबाट तीन वटै टोलीको अन्तिम १६ मा जाने सम्भावना जीवित छ ।
प्रकाशित मिति १२ मंसिर २०७६, बिहीबार ०३:५५
कोम्यान १० मिलियन तलब छाड्न सहमत : खेलाडीले के गर्लान् ?
रोनाल्डोले आगामी खेल नखेल्ने
फिफाको नयाँ वरीयता सार्वजनिक : इटाली ४ वर्षपछि टप–१० मा उक्लियो, नेपाल घटुवा
म्याराडोनाप्रति सामूहिक श्रद्धाञ्जली : थामिएन मेस्सीको आँसु
‘अब १० नम्बर जर्सीलाई सधैंका लागि रिटायर गराउनुपर्छ’
लुकाकुले कारणसहित रोनाल्डो र मेस्सीमा एक रोजे
रियलविरुद्ध रातो कार्ड खाने भिडाललाई आफ्नै क्लबले कारबाही गर्ने !
नापोलीको टिम म्याराडोनाको १० नम्बर जर्सी लगाएर मैदान उत्रिँदा …..
एक महान् फुटबलरको अन्तिम बिदाइ : ३० तस्बिरमा हेरौं
‘एउटा भगवान’को अन्त्य : जहाँ म्याराडोनालाई भगवान मानिन्छ